Vaovao - Varotra British Steel amina China Jingye Group dia vita
Varotra British Steel ho an'ny China Jingye Group dia vita
3 200 ny asa efa mahay any Scunthorpe, Skinningrove ary any Teesside no voaaro amin'ny fahavitan'ny fifanarahana hivarotana ny British Steel amin'ny Jingye Group mpanao vy any China, nankasitrahan'ny governemanta androany.
Ny varotra dia manaraka ny fifanakalozan-kevitra marobe eo amin'ny governemanta, ny Mpandray ofisialy, mpitantana manokana, sendika, mpamatsy ary ny mpiasa. Manamarika dingana iray lehibe amin'ny fiarovana ny ho avy maharitra sy maharitra amin'ny fanaovana vy any Yorkshire sy Humber ary Avaratra Atsinanana.
Ao anatin'ny fifanarahana dia nampanantena ny Jingye Group fa hampiasa vola 1,2 miliara mandritra ny 10 taona hanavaozana ireo tranokala British Steel ary hanamafisana ny fahombiazan'ny angovo.
Nilaza ny praiminisitra Boris Johnson:
Ny feon'ireto vy ireto dia nanako nanerana an'i Yorkshire sy Humber ary ny Avaratra Atsinanana. Androany, rehefa mandray ny dingana manaraka eo ambany fitarihan'i Jingye i British Steel, azontsika antoka fa hivoaka mandritra ny am-polony taona maro ho avy ireo.
Tiako ny misaotra ny mpiasa Britanika Steel any Scunthorpe, Skinningrove ary ao amin'ny Teesside tamin'ny fanoloran-tenany sy ny fahaizan'izy ireo nahatonga ny orinasa hiroborobo tato anatin'ny herintaona. Ny fampanantenan'i Jingye hampiasa vola 1,2 miliara ho an'ny orinasa dia fanentanana tonga soa izay tsy hiantoka asa an'arivony fotsiny, fa hiantoka hatrany ny firoboroboan'ny British Steel.
Nitsidika ny tranokala Scunthorpe British Steel ny sekretera Alok Sharma androany hihaona amin'ny CEO an'ny Jingye Group, Andriamatoa Li Huiming, tale jeneralin'ny Steel Steel, Ron Deelen, masoivoho sinoa any UK, Andriamatoa Liu Xiaoming ary ireo mpiasa, solontenan'ny sendika, solombavambahoaka ary mpiara-miasa aminy. .
Ny sekretera ny orinasa Alok Sharma dia nilaza hoe:
Ny fivarotana ny British Steel dia maneho ny fahatokiana lehibe amin'ny indostrian'ny vy any Angletera. Manamarika ihany koa ny fiandohan'ny vanim-potoana vaovao ho an'ireo faritra nanorina ny fivelomany manodidina ny famokarana vy indostrialy.
Te-hanome voninahitra ireo rehetra izay nandray anjara tamin'ny fanatanterahana an'io fifanarahana io aho, indrindra ireo mpiasa British Steel izay fantatro fa ho sarotra ny fisalasalana.
Izaho koa te-hanome toky ireo mpiasan'ny British Steel izay mety miatrika redundancy fa manentana ny loharanon-karena rehetra izahay mba hanomezana eo noho eo ny fanohanana sy ny torohevitra ho an'ireo traboina.
Ny British Steel dia nampiasaina hananganana ny zava-drehetra manomboka amin'ny kianja filalaovana ka hatrany amin'ny tetezana, any anaty ranomasina ary any amin'ny toerana fandalinana ny habakabaka Jodrell Bank.
Ny orinasa dia niditra an-tsehatra tamin'ny tsy fandriam-pahalemana tamin'ny Mey 2019 ary taorian'ny fifampidinihana lalina dia nanamafy ny fivarotana tanteraka ny British Steel ho an'ny Jingye Group ny orinasa marobe - anisan'izany ny asan'ny vy ao Scunthorpe, ny fikosoham-bary ao Skinningrove ary ao amin'ny Teesside - ary koa orinasa orinasa TSP Engineering sy FN Steel.
Roy Rickhuss, sekretera jeneralin'ny vondron'orinasa mpivarotra vy:
Androany no manomboka ny toko vaovao ho an'ny Steel Steel. Dia lavitra sy sarotra ny nahatongavana tamin'izany. Manokana, ity fividianana ity dia porofon'ny ezaka rehetra nataon'ny mpiasa manerantany, izay na dia tao aza ny fisalasalana, dia namaky ny firaketana momba ny famokarana. Androany koa tsy ho vita raha tsy tsikaritry ny governemanta ny maha-zava-dehibe ny vy ho toy ny indostria fototra fototra. Ny fanapahan-kevitra hanohana ny orinasa amin'ny alàlan'ny fananana vaovao dia ohatra iray amin'ny paikady indostrialy tsara miasa. Afaka miorina amin'izany ny governemanta amin'ny hetsika bebe kokoa mba hamoronana tontolo iainana mety hananan'ny mpamokatra vy rehetra.
Manantena ny hiara-hiasa amin'i Jingye izahay eo am-pitondrana ny drafitry ny fampiasam-bolan'izy ireo, izay manana ny fahafaha-manova ny orinasa sy mahazo ho avy maharitra. Jingye dia tsy mandray andraikitra fotsiny fa mandray mpiasa an'arivony maro ary manome fanantenana vaovao ho an'ireo vondron'olona vy any Scunthorpe sy Teesside. Fantatsika fa mbola betsaka ny asa tokony hatao, ny manohana indrindra ireo izay tsy nahazo asa tamin'ny orinasa vaovao.
Ho an'ireo mpiasa 449 miatrika ny fahaverezana ao anatin'ny varotra, ny Sampan-draharaha Rapid Response Service sy ny National Career Service dia navondrona hanome ny fanampiana sy torohevitra ifotony. Ity serivisy ity dia hanampy ireo tratry ny fifindrana amin'ny asa hafa na hanana fotoana fanofanana vaovao.
Manohy manome fanohanana ny indostrian'ny vy ny governemanta - ao anatin'izany ny fanampiana 300 tapitrisa mahery amin'ny vidin'ny herinaratra, ny torolàlana momba ny fividianam-bahoaka ary ny antsipirian'ny fantsom-by vy amin'ireo tetikasan'ny fotodrafitrasa nasionaly mitentina £ 500 tapitrisa mandritra ny folo taona ho avy.
Fotoana fandefasana: Jul-08-2020
Suite 1501, Plaza Fiaraha-miasa Vaovao B1, No. 108 He Zuo Road, Shijiazhuang, Sina